Interviews & Profiles » မလော်ပါ – ဒေါ်နီနီဒွန်း	14
aye.kk says: မလတ်
ဇီဇီခင်ဇော် says: တိုက်ပွဲ ဝင် ခွပ်ဒေါင်း ကိုပဲ ကြိုက်တယ်။
ဦးကြောင်ကြီး says: မန်းလေးကနေ ဝံအရွေးခံမည့် နေဇင်လတ် မြန်တျန့်တိုတက်ရေးပါတီ ကိုယ်စားလှယ် windtalker (ခ) မောင်ပေအတွက်လည်း စည်းရုံးပေးပါခမြှာ…။ လေကျီးမိုးကျီး ဂဇွတ်ရွာမှာ ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက် ရှိမှာဆိုလို သူတျောက်ပဲ မြင်လို့ပါ။
ကထူးဆန်း says: ပေးဘူး …အရီးကို ပေးမလို့ စောင့်နေတာ….. စတာပါ အရီး .. ကျွန်တော့်မြို့  နယ် မဟုတ်လို့ပါ …
kai says: သူ့ပြိုင်ဖက်.. ပြည်ခိုင်ဖြိုးက ဘယ်သူလည်းသိမှ.. ပိုကောင်းမယ်ထင်မိတယ်…။
ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာ.. မဲတွေ.. ကောက်သင်းကောက်လိုက်သိမ်းယူနေဖို့မလို.. ယှဉ်ပြိုင်ဖက်.. အတိုက်အခံကိုအနိုင်ချယုံ…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: NLD ကို မဲပေးဖို့သာဆော်သြနေတာ တကယ်တော့ မဲစာရင်းစစ်ဖို့က ပိုအရေးကြီးနေသလားလို့။
မြစပဲရိုး says: ကျေးဇူးပါ ဇီကလေး နဲ့ အစ်မအေး။
ကျွန်မ ကို ရုပ်ဆိုးတယ်ပြောရင် မကြိုက်ဘူး။ တကယ်တော့လဲ သူများ အပြစ် တွေ ဘဲ ရှာပြီး ပြောရတာ ပိုပြီး ကောင်း၊ ပိုပြီး လွယ် တာမဟုတ်လား။
ကျွန်မ အဒေါ်တွေ ဆီမှာတော့ ဒီချုပ် က အစုတ် မှာ ဝင်ပြိုင်မှာက ဒုဝန်ကြီး တဲ့။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14461
kai says: ပြည်ခိုင်ဖြိုးအမတ်နေရာတွေချပေးသွားသူထဲ.. ဦးရွှေမန်းက.. ပါတီဥက္ကဌ.. ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ေ၇းဥက္ကဌအနေနဲ့.. သေသေချာချာစီစဉ်သွားတယ်လို့ထင်တယ်..။
ဦးမင်းအောင်လှိုင်သမ္မတ…။ ဒေါ်စုဝန်ကြီးချုပ်နဲ့.. ၀န်ကြီးနေရာတွေကို.. ပါတီ၂ခု.. တ၀က်စီလောက်မျှယူ.. ညွှန့်ပေါင်းဖွဲ့နိုင်ရင်.. တော်တော်ဟုတ်သွားမယ်လို့.. ထင်..။ အိပ်မက်လားတော့မသိ…။ ဖြစ်ချင်တာပြောတာပါလေ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2714
ကထူးဆန်း says: ဖြစ်ခဲ့ ရင်တော့ .. တိုင်းပြည်ငြိမ်မယ် ..
မြစပဲရိုး says: . ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကတော့ ထားရာနေ စေရာ သွားမဲ့ သူတော့ ဟုတ်မယ်မထင်ပါ ကထူးဆန်း ရယ်။ Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: အိန္ဒိယ မှာ ဝန်ကြီးချုပ် က သမ္မတ ထက်ပိုပြီး လုပ်ပိုင်ခွင့် ပါဝါ ကြီး တာရော။ :-)))
Ma Ma says: အားရစရာပဲ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: Officially announced ….
naywoon ni says: မ​လော်​ဘူး ဆိုတာကိုက ​လော်​လိုက်​တာပါပဲ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.